के हातमा पैसा टिक्दैन ? यी हुन् हातमा पैसा टिकाउने अचुक उपाय – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /रोचक/के हातमा पैसा टिक्दैन ? यी हुन् हातमा पैसा टिकाउने अचुक उपाय
८) क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्नुहुन्छभने, आफ्नो बिलको ड्यु मिति भन्दा पछि तिर्नुहुन्छ भने यो आदतबाट बच्नुहोस् । समयमा ड्यू तिर्नु र फजुुल खर्च गर्नबाट बच्नुहोस् ।
नेपालमा थप ५३ जनामा कोरोना पुष्टि, कुन जिल्लामा कति ?
सपना रोका मगरले राष्ट्रपति भण्डारीलाई भेटेर भनिनसाना बालिकासमेत बलात्कारको शिकार हुँदा मन पाेल्दैन